Fepetra sy fepetra ho an'ireo mpanao an-tapitrisany | Fepetra fampiasana - Mpanamboatra an-tapitrisany
Fepetra sy fepetra ho an'ireo mpanao an-tapitrisany | Fepetra fampiasana
Azafady mba jereo eto ambany ny fepetra sy fepetra farany an'ny Mpampiasa tapitrisa ("Fepetra fampiasana").
Azafady vakio tsara ireo teny ireo. Fandraisana sy fampiasana ny vokatra Million Makers ("Products"), tolotra Million Makers ("Services"), ary ny tranokala Million Makers https://MillionMakers.com/ ("Website") na subdomain (s) rehetra, ao anatin'izany ny misy ny atiny rehetra, dia miankina amin'ny fanekenao amin'ireo fepetra ireo. Tokony hamaky, hifanaraka ary hanaiky ny fepetra rehetra ao anatin'ireto fepetra ireto ianao. Amin'ny famoronana kaonty, na amin'ny alàlan'ny fampiasana na fitsidihana ny tranokalanay na ny vokatra na serivisinao, dia voafehin'ireto Terms ireto ianao ary manondro ny fanekenao hatrany ireo fepetra ireo.
Ny kaonty mpanamboatra an-tapitrisany anao
Raha mamorona kaonty amin'ny tranokala ianao, dia tompon'andraikitra amin'ny fitazonana ny fiarovana ny kaontinao, ary tompon'andraikitra tanteraka amin'ny hetsika rehetra mitranga eo ambanin'ny kaonty ianao sy ny hetsika hafa rehetra mifandraika amin'ny kaonty. Manaiky ianao hanome sy hitazona fampahalalana marina, ankehitriny ary feno, ao anatin'izany ny mombamomba anao amin'ny fampandrenesana sy fifandraisana hafa avy aminay sy ny mombamomba ny fandoavam-bola. Tsy azonao atao ny mampiasa fampahalalana diso na mamitaka mifandraika amin'ny kaontinao, na mifanakalo amin'ny anarana na lazan'ny hafa, ary Million Makers dia mety manova na manala vaovao izay heveriny fa tsy ara-dalàna na tsy ara-dalàna, na mety hampiharihary ireo Mpiasa an-tapitrisany amin'ny fitakiany. antoko fahatelo. Manaiky ianao fa mety handray fepetra izahay hanamarinana ny maha-marina ny fampahalalana nomenao anay.
Tompon'andraikitra amin'ny fandraisana fepetra mety ianao mba hitazomana ny tsiambaratelon'ny anaranao sy ny teny miafinao. Tokony hampandre avy hatrany ny mpanamboatra tapitrisa ianao raha mampiasa tsy ara-dalàna ny mombamomba anao, ny kaontinao na ny fandikan-dalàna hafa. Mpanamboatra an-tapitrisany dia tsy tompon'andraikitra amin'ny hetsika na fanafoanana nataonao, anisan'izany ny fahasimbana na karazany inona na inona vokatry ny fihetsika na fanafoanana toy izany.
Andraikitry ny mpampiasa ny MillionMakers, vokatra ary / na serivisy
Ny fidiranao amin'ny "MillionMakers.com", sy ny fampiasanao ny tranokala, ny vokatra ary / na ny serivisy dia tsy maintsy ara-dalàna ary tokony hanaraka ny fepetra rehetra, ary ny fifanarahana hafa misy eo aminao sy ireo Mpanamboatra tapitrisa sy / na Vahaolana MM. INC sy / na Million Makers LLC ary / na MM LLC ary / na Million Makers Solutions INC sy / na MM LTD. ary / na Million Makers LTD.
Rehefa miditra na mampiasa ny tranokala "MillionMakers.com", Vokatra ary / na Serivisy dia tokony hitondra tena amin'ny fomba sivily sy feno fanajana amin'ny fotoana rehetra ianao. Izahay manokana dia mandrara ny fampiasana ny tranokala, vokatra, ary / na serivisy, ary manaiky ianao tsy hampiasa ny tranokala, ho an'ireto manaraka ireto:
Mandray anjara amin'ny fitondran-tena mety hahatonga heloka bevava, miteraka andraikitra amin'ny fanjakana hafa na raha tsy izany dia manitsakitsaka ny tanàna, fanjakana, lalàna nasionaly na iraisam-pirenena na lalàna izay tsy maharaka ny Internet.
Mampita, mandefa, na mandefa fitaovana misy zon'ny mpamorona na an'ny ankolafy hafa raha tsy tompon'ny zon'ny mpamorona ianao na manana alalana avy amin'ny tompony handefa azy.
Mifampiresaka, mandefa, na mandefa fitaovana izay manambara tsiambaratelo momba ny varotra, raha tsy tomponao ianao na mahazo alalana avy amin'ny tompony.
Mampita, mandefa, na mandefa fitaovana izay manitsakitsaka ny fananana ara-tsaina, fiainana manokana na zon'ny fanaovana dokambarotra an'ny hafa.
Ny fiezahana hanelingelina amin'ny fomba rehetra amin'ny tranokala, na ny tamba-jotra na ny fiarovana ny tamba-jotra, na ny fiezahana hampiasa ny tranokalanay hahazoana fidirana tsy ara-dalàna amin'ireo rafitra informatika hafa.
Midira amin'ny data tsy natao ho anao, na miditra amin'ny mpizara na kaonty, izay tsy nomena alalana hidiranao.
Fanandramana manadihady, manara-maso na manandrana ny fahalemen'ny rafitra na tamba-jotra na manitsakitsaka ny fepetra fiarovana na fanamarinana tsy misy alalana araka ny tokony ho izy (na mahomby amin'ny fanandramana toy izany)
Ny fiezahana hanelingelina na hanelingelina ny fiasan'ny tranokala, vokatra, ary / na serivisy, na ny fanomezana serivisy ho an'ireo mpampiasa hafa amin'ny tranokala, ny mpamatsy fampiantranoana na ny tamba-jotra anay, ao anatin'izany, tsy misy fetrany, amin'ny alàlan'ny fandefasana virus amin'ny tranokala, fandefasana entana be loatra, "tondra-drano", "baomba baomba" na "fianjerana" amin'ny tranokala.
Ho fanampin'izay, raha mampiasa kaonty ianao, mandray anjara amin'ny kaonty, mandefa lahatsoratra amin'ny tranokala, mandefa rohy amin'ny tranokala, na manao izay azo ampitaina amin'ny alàlan'ny tranokala (izay atiny rehetra, "Atiny"), ianao irery no tompon'andraikitra ho an'ny atin'ny, sy ny fahavoazana ary ny fahasimbana aterak'izany Atiny izany. Izay no izy, na inona na inona votoatiny resahina, sary, sary, na rindrambaiko solosaina. Amin'ny alàlan'ny fanolorana ny atiny dia asehonao ary omenao antoka fa:
ny fisintomana, ny fanaovana kopia ary ny fampiasana ny Atiny dia tsy hanimba ny zon'ny tompony, ao anatin'izany fa tsy ferana amin'ny zon'ny mpamorona, patanty, mari-barotra na zon'ny tsiambaratelon'ny antoko fahatelo.
Raha manana zon'ny fananana ara-tsaina noforoninao ny mpampiasa anao, ianao na (i) nahazo alalana an-tsoratra avy amin'ny mpampiasa anao handefa na hampandeha ny atiny, ao anatin'izany nefa tsy voafetra amin'ny rindrambaiko rehetra, na (ii) miaro amin'ny mpampiasa anao ny famoahana an-tsoratra raha ny amin'ny zon'ny rehetra ao anatiny na amin'ny atiny.
nanaja tanteraka ny fahazoan-dàlana avy amin'ny antoko fahatelo mifandraika amin'ny Atiny ianao, ary nanao ny zavatra rehetra ilaina mba handraisana am-pahombiazana amin'ny mpampiasa farany izay misy fepetra takiana.
ny Atiny dia tsy misy na mametraka viriosy, kankana, malware, soavaly Trojan na votoaty manimba na manimba hafa.
ny Atiny dia tsy spam, ary tsy misy atiny ara-barotra tsy etika na tsy tiana natao hampandehanana ny fivezivezena any amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo na hanamafisana ny laharan'ny milina fikarohana an'ny tranokalan'ny antoko fahatelo, na koa hanaovana hetsika tsy etika na tsy ara-dalàna (toy ny phishing) na mamily ny mpandray azy amin'ny loharanon'ny fitaovana (toy ny spoofing).
ny votoatiny dia tsy vetaveta, manambany olona, ​​mankahala olona na manavakavaka foko ary tsy manitsakitsaka ny tsiambaratelo na zon'ny fanaovana dokambarotra an'ny antoko fahatelo.
Raha hamafana ny atiny ianao dia hanao ezaka mitaky ny hanalana azy io amin'ny tranokala sy ireo mpizara anay ny Mpiasa an-tapitrisany, saingy ekenao fa ny cache na ny fanondroana ny atiny dia mety tsy ho hitan'ny besinimaro avy hatrany.
Tompon'andraikitra amin'ny fandraisana fepetra ilaina ianao mba hiarovana ny tenanao sy ny rafitry ny solosainao amin'ny viriosy, kankana, soavaly Trojan, ary atiny hafa manimba na manimba. Mpiasa an-tapitrisany no handray fepetra mety hisorohana ny fandefasana atiny manimba avy amin'ny rafitry ny haitao mankany amin'ny rafitry ny haitao.
Mpiasa an-tapitrisany no mandà ny tompon'andraikitra amin'ny fahavoazana na fahasimbana ateraky ny fidirana na fampiasana ny tranokala, vokatra, ary / na serivisy, na ny fidirana na ny fampiasana tranokala tsy an-tapitrisany.
Mpiasa an-tapitrisany no manan-jo (na dia tsy adidy) handà (i) handà na hanaisotra izay atiny rehetra izay, raha ny hevitry ny ekipa Million Makers, dia manitsakitsaka ny politikan'ny Mpiasa an-tapitrisany na manimba na manohitra, na (ii) mijanona na mandà fidirana sy fampiasana ny tranokala, vokatra, ary / na serivisy, ho an'ny olona na inona na inona antony, amin'ny fahalalàn'ny Mpiasa an-tapitrisany.
Fampiasana ny atiny fahatelo, lozisialy, fampiharana, serivisy ary fitaovana
Mpiasa an-tapitrisany no tsy nandinika, ary tsy afaka mandinika, ny fitaovana rehetra, ao anatin'izany ny rindrambaiko solosaina, napetraka tao amin'ny tranokala, ary noho izany dia tsy tompon'andraikitra amin'ny atiny, ny fampiasana na ny vokany. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tranokala, mpanamboatra tapitrisa dia tsy maneho na milaza fa manohana ny fitaovana napetraka izy io, na mino fa marina, mahasoa na tsy manimba izany fitaovana izany. Ny tranokala dia mety misy atiny manafintohina, tsy mendrika, na maharikoriko, ary koa atiny misy tsy fahatomombanana ara-teknika, hadisoan-tsoratra ary hadisoana hafa. Ny tranokala dia mety misy koa zavatra manitsakitsaka ny tsiambaratelo na zon'ny dokambarotra, na manitsakitsaka ny fananana ara-tsaina sy ny zon'ny tompona hafa, an'ny antoko fahatelo, na ny fisintomana, ny fakana tahaka na ny fampiasana azy ireo dia iharan'ny fe-potoana sy fepetra fanampiny, voalaza na tsy voalaza. Mpiasa an-tapitrisany no mitsipaka andraikitra amin'ny fahavoazana sy / na fahasimbana ateraky ny fampiasana na fisintomana ny fandefasan'ny antoko hafa ao amin'ny tranonkala.
Votoatiny navoaka tao amin'ny tranonkala hafa
Tsy nandinika izahay, ary tsy afaka nandinika, ny fitaovana rehetra, ao anatin'izany ny rindrambaiko solosaina, natao tamin'ny alàlan'ny tranonkala sy pejy web izay misy rohy MillionMakers.com, ary ilay rohy mankany amin'ny MillionMakers.com. Million Makers dia tsy manana fifehezana ireo tranonkala sy pejin-tranonkala tsy mpanapitrisa ary tsy tompon'andraikitra amin'ny atiny na ny fampiasany. Amin'ny fampifandraisana amin'ny tranokala na pejin-tranonkala tsy misy Million Makers, Million Makers dia tsy maneho na milaza fa manohana tranonkala na pejin-tranonkala toy izany izy.
Satria ny Mpiasa an-tapitrisany dia mitaky ny hafa hanaja ny zony hanana fananana ara-tsaina, manaja ny zon'ny fananana ara-tsaina an'ny hafa izy. Raha mino ianao fa manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona anao ny fitaovana miorina na mifandray amin'ny tranokala, amporisihina ianao hampandre ny Mpiasa an-tapitrisany ao amin'ny info@millionmakers.com. Mpanamboatra an-tapitrisany dia, araka izay tratrany, hamaly ireo fanamarihana rehetra ireo, ao anatin'izany ny takiana na ilaina amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo fitaovana manimba na fanalana ny rohy rehetra mankany amin'ilay fitaovana manimba. Mba hitondrana ny sainay fitaovana manimba, dia andefaso mailaka izahay azafady, tsy maintsy manome izao fampahalalana manaraka izao anay ny Agent DMCA:
(a) sonia elektronika na ara-batana an'ny olona nahazo alalana hiasa amin'ny anaran'ny tompon'ny asa zon'ny mpamorona;
b) fampahafantarana ny sanganasa manana zon'ny mpamorona sy ny toerana misy eo amin'ny tranokalan'ilay asa voalaza fa manitsakitsaka;
d) fanambarana an-tsoratra fa mino mafy ianao fa ny fampiasana ifandresen-dahatra dia tsy eken'ny tompony, ny solontenany na ny lalàna;
(d) ny anaranao sy ny mombamomba anao, ao anatin'izany ny nomeraon-telefaona sy ny adiresy mailakao; SY
e) fanambarana nataonao fa ny fampahalalana etsy ambony ao amin'ny fampandrenesanao dia marina ary, amin'ny fanamelohana ny fianianana, dia ianao no tompon'ny zon'ny mpamorona na nomena alalana hiasa amin'ny tompon'ny zon'ny mpamorona.
Ny fampahalalana mifandraika amin'ny Agent DMCA anay ho fampandrenesana ny filazàna ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona amerikana dia: MM Solutions Inc., mailaka: info@millionakers.com.
Raha sendra mpampiasa iray izay mety hanitsakitsaka na hanitsakitsaka matetika ny zon'ny mpamorona na ny zon'ny fananana ara-tsaina hafa an-tapitrisany na mpanao hafa, ny Million Makers dia mety, amin'ny fahalalàny hevitra, hamarana na handà ny fidirana sy fampiasana ny tranokala, vokatra ary / na Serivisy. Raha misy izany famaranana izany dia tsy manana adidy hanome vola famerenam-bola izay vola efa naloa tamin'ny Mpiasa an-tapitrisany ny olona an-tapitrisany raha ny momba izany famaranana izany.
Million Makers, ny logo an'ny Million Makers, ary ny mari-pamantarana hafa, ny mariky ny serivisy, ny sary ary ny logo ampiasaina amin'ny tranokala, vokatra, ary serivisy, dia marika famantarana na marika famantarana an'ny Million Makers na mpamatsy vola an'i Million Makers. Marika hafa, mariky ny serivisy, sary ary logo ampiasaina amin'ny tranokala, vokatra, ary serivisy, dia mety ho mariky ny antoko fahatelo hafa raha toa ka misy tombony manokana sy ampiasainay izany fahazoan-dàlana izany raha tsy voalaza manokana, na mety ny fananan'ny tompony avy. Ny fampiasanao ny tranokala dia manome anao zony na fahazoan-dàlana hamerina na raha tsy izany dia mampiasa Million Makers na mari-barotra fahatelo. Toy izany koa, tsy manome zonao na fahazoan-dàlana hiteraka na hampiasa ny marika, marika, serivisy ary / na logo ianao, raha tsy nomen-kery mazava anao.
Fiovana amin'ny atiny, vokatra ary serivisy
Ny fanaingoana sy ny famaritana ny tranokala, ao anatin'izany ny tsy ferana ny atiny rehetra misy, ny vokatra, ary ny serivisy dia azo ovaina sy / na havaozina indraindray, amin'ny fahefan'ireo mpanamboatra tapitrisa. Voafehin'ny fanovana na fanavaozam-baovao toy izany ianao, raha tsy mampihena ny fiasan'ny tranokala, vokatra ary / na serivisy ireo fanovana ireo.
Fepetran'ny fiantohana ny mpamatsy vola an-tapitrisany, ny mpamatsy azy ary ny mpanome fahazoan-dàlana azy
Mpampiasa an-tapitrisany no manome fampandrenesana ho an'ny mpanjifa Mpiasa an-tapitrisany amin'ny vokatra sy / na serivisy, raha toa ka nandoa ny sarany rehetra ireo mpanjifa ireo ary tsy manefa adidy amin'ny Million Makers, misy ny vokatra sy / na serivisy ("uptime") valo amby sivi-folo isan-jato (98%) isam-bolana. Raha noho ny antony tokana omena ny Mpiasa an-tapitrisany ny fotoana fohy dia tsy mahatratra ny fotoana fohy, dia tsy tompon'andraikitra amin'ny famoahana karazana "simba voafoaka" ny Mpiasa an-tapitrisany, ny vokatra sy / na ny serivisy dia tsy azo aleha amin'ny fandikan-dalàna. Manaiky ianao fa sarotra ny mamaritra ny habetsaky ny fahavoazana ho azonao raha tsy feno ny fotoana iasana. Manaiky ihany koa ianao fa ny tetiandrom-panonerana etsy ambony dia tsy hiteraka karazana fahasimbana nafoana mety hiteraka karazana fatiantoka mety hitranga sy ny habetsaky ny fatiantoka anao. Na izany aza, raha tsy misy anao ny vokatra sy / na serivisy noho ny antony tokana omena ny Mpiasa an-tapitrisany mandritra ny dimy (5) andro na mihoatra dia azonao atao ny manafoana ny fifanarahana an-tsoratra miaraka amin'ny vokany eo noho eo, ary azonao atao ny mangataka fiverenan'ny saram-pandrahanao mifandraika amin'ny vokatra sy / na serivisy tsy misy, manohana ny fe-potoana sisa tavela amin'ny fifanarahana.
Mpanamboatra an-tapitrisany sy ireo manana fahazoan-dàlana azy dia tsy manome antoka na fisolo tena momba ny tranokala, vokatra, serivisy, na tranokala mifandraika na ny atiny, ao anatin'izany ny atiny, ny fampahalalana ary ny fitaovana ao aminy na ny maha-marina, ny fahafenoany, na ny faharetan'ny atiny. , fampahalalana sy fitaovana. Izahay koa dia tsy manome toky na maneho fa ny fidiranao amin'ny na fampiasana ny tranokala, vokatra, ary / na serivisy, na tranokala mifandraika dia tsy ho tapaka na tsy misy hadisoana na fanadalana, ireo lesoka ireo dia ahitsy, na ny tranokala, vokatra , ary / na Serivisy, na tranonkala mifandraika dia tsy misy viriosy solosaina na singa hafa manimba. Izahay dia tsy tompon'andraikitra ary tsy tompon'andraikitra amin'ny fahasimbana na viriosy mety hamindra amin'ny fitaovan'ny solosainao na fanananao hafa noho ny fampiasanao ny vokatra na serivisy, na ny fidiranao, fampiasana, na fitetezana ny Tranonkala, na ny fisintomanao na ny fampidiranao ny atiny rehetra avy amin'ilay tranokala. Raha tsy afa-po amin'ny tranokala ianao, ny vahaolana tokana dia ny fampitsaharana ny fampiasana ny tranokala.
Tsy misy toro-hevitra, valiny na fampahalalana, na am-bava na an-tsoratra, azonao avy amin'ny Million Makers, na amin'ny alàlan'ny tranokala, dia tsy afaka hamorona fiantohana tsy vita mazava eto. Ny mpanamboatra tapitrisa dia tsy voatery manohana, manohana, manome sazy, mamporisika na manaiky an'izay atiny na atiny mpampiasa, na hevitra, tolo-kevitra, atiny, rohy, angona na torohevitra voalaza na voatonona ao anatiny, ary ny Mpiasa an-tapitrisany dia manary mazava ny andraikitra rehetra sy fifandraisana amin'ny atin'ny mpampiasa sy izay atiny hafa, fitaovana na fampahalalana misy amin'ny na amin'ny alàlan'ny tranokala, vokatra, ary / na serivisy, noforonina na nomen'ny mpampiasa na antoko fahatelo hafa.
Azafady azafady fa ny faritra sasany dia mety tsy mamela ny fanilihana ny antoka azo antoka, noho izany ny sasany amin'ireo fanilihana etsy ambony dia mety tsy mihatra aminao. Zahao ny lalànao eo an-toerana raha misy fameperana na fetra mifandraika amin'ny fanilihana ny antoka azo antoka.
Fepetran'ny tompon'andraikitra amin'ireo mpanamboatra tapitrisa, ireo mpamatsy azy ary ireo manana fahazoan-dàlana
Na amin'ny lafiny inona na amin'ny fotoana inona, na iza na iza, ny zanany sy ny mpiara-miasa aminy, ny talen'izy ireo, ny tompon'andraikitra, ny mpiasa na ny agents, ary ny solontena hafa, dia tompon'andraikitra amin'ny fahasimbana tsy mivantana, vokadratsoa, ​​sendra misy, manokana, na manasazy, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny tombony very sy fanelingelenana amin'ny asa aman-draharaha, na amin'ny fifanarahana na amin'ny fampijaliana, ao anatin'izany ny tsy fitandremana, mipoitra amin'ny fomba rehetra amin'ny fampiasana ny tranokala, vokatra, serivisy ary / na ny atiny ao anatiny, na ny tranokala misy rohibe na dia misy torohevitra mazava momba izany aza ny antoko toy izany ny fahasimbana toy izany. Ankoatra ny fahasimbana mifandraika amin'ny fanitsakitsahana ara-dalàna ny fananana ara-tsaina vokatry ny vokatra sy / na serivisy natolotry ny antoko iray nefa tsy misy atiny fahatelo, raha sendra misy ny andraikitra amin'ny antoko dia mihoatra ny vola rehetra noraisin'ireo mpanamboatra tapitrisa avy aminao nandritra ny vanim-potoana roa ambin'ny folo (12) volana mialoha ny daty nitrangan'ny fahasimbana voalohany.
Ny solontenanao sy ny fiantohana anao
Ianao dia misolo tena sy manome antoka fa ny fampiasanao ny tranokala, ny vokatra ary / na ny serivisy dia hifanaraka amin'ny fifanarahana misy eo aminao sy ireo mpanamboatra tapitrisa, ireo mpanamboatra tapitrisa. politika fiarovana fiainan'olona, ireo Fepetra ireo, ary misy lalàna sy fitsipika mifandraika amin'izany, ao anatin'izany tsy misy fetrany ny lalàna na lalàna eo an-toerana ao amin'ny firenena, fanjakana, tanàna, na faritra hafa amin'ny governemanta, momba ny fitondran-tena an-tserasera sy ny atiny azo ekena, ary ao anatin'izany ny lalàna mifandraika rehetra amin'ny fampitana ny teknika angon-drakitra naondrana avy any amin'ny firenena onenananao, ary misy politika na fepetra sy fepetra mifandraika amin'izany.
Miankina amin'ny fetra voalaza etsy ambony, ny Ankolafy dia manaiky ny miaro, manameloka ary mifampijaly tsy misy hafa, ao anatin'izany ny zanany sy ny mpiara-miasa aminy, ny talen'ny, ny tompon'andraikitra, ny mpiasa na ny agents, ary ny solontena hafa, avy sy manohitra ny fitakiana, fatiantoka, ny fahasimbana, ny trosa ary ny vidiny (ao anatin'izany fa tsy ferana amin'ny sarany mpisolovava mirary sy ny vidin'ny fitsarana), mipoitra avy, mifandraika amin'ny:
fanitsakitsahana materialy an'ireo fepetra ireo, na fifanarahana misy eo amin'ireo Mpifanaraka, na
misy fiampangana fa misy fampahalalana na fitaovana (ao anatin'izany ny atiny rehetra) manitsakitsaka ny zon'ny antoko fahatelo.
Azonao sy ekenao fa, amin'ny alàlan'ny fampiasana ny vokatra sy / na serivisy, dia tompon'andraikitra amin'ny tahirin-kevitra rehetra ianao, ao anatin'izany ny mombamomba anao manokana, nangonina na namboarina tamin'ny alàlan'ny vokatra sy / na serivisy anay. Hiaro, handoa onitra ary hitahiry ny mpanamboatra tapitrisa ianao, tsy misy fetra, noho ny fahasimbana rehetra mifandraika amin'ny (fanamelohana) fanitsakitsahana ny lalàna momba ny tsiambaratelo amin'ny alàlan'ny fampiasana ny vokatra sy / na serivisy eo ambanin'ny kaontinao.
Ny ankolafy tsirairay avy dia handray fiantohana ampy mba hanonerana ny loza mety hitranga eto, anisan'izany ny fa tsy voafetra amin'ny fiantohana ankapobeny sy / na fiantohana ny vokatra. Mikasika ny fiarovana, tsiambaratelo ary ny fahamendrehan'ny angon-drakitra, ny ankolafy tsirairay dia tompon'andraikitra amin'ny fitazonana ireo fepetra ara-teknika sy fandaminana mifanaraka amin'izany mba hiarovana ny angon-drakitra voahodina ao amin'ny rafitr'izy ireo manokana sy amin'ny rafitra antoko fahatelo izay ampiasain'ny antoko voakasik'izany.
Mpanamboatra an-tapitrisany dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fanemorana ny fanatanterahana na ny tsy fanatanterahana ny adidiny aminao noho ny fisehoan-javatra tsy takatry ny fifehezana ara-dalàna.
Mpiasa an-tapitrisany no hampandre anao avy hatrany ny antony mahatonga ny fahatarana na ny fijanonana (ary ny faharetany) ary handray ny dingana mety rehetra handresena ny fahatarana na ny fijanonana.
Ny fiteny arbitration dia ho anglisy. Izay loka, didim-pitsarana na famoahana navoakan'ny arbitration toy izany dia azon'ny antoko iray ampidirina amin'ny alàlan'ny didim-pitsarana ampiharina avy amin'ny fitsarana manana fahefana mahefa.
Raha misy ampahany amin'ireto fehezan-dalàna ireto mihazona tsy manan-kery na tsy azo ampiharina, io ampahany io dia heverina ho taratry ny fikasan'ny Antoko tany am-boalohany, ary ny ampahany sisa dia hijanona ho manan-kery tanteraka. Ny fanesorana na avy amin'ny ankolafy misy ny fe-potoana na ny fepetra misy amin'ireto fehezan-dalàna ireto na izay fandikana azy rehetra, na eo aza ny tranga iray dia tsy hanafoana izany fe-potoana izany na fepetra na fandikan-dalàna manaraka azy. Ianao irery ihany no afaka manome ny zonao ao ambanin'ireto Terms ireto amin'ireo antoko manaiky, ary manaiky hofehezin'ny, ireo fehezanteny voasoratra an-tsoratra ireo. Mpanamboatra an-tapitrisany maro dia afaka manome ny zony ao ambanin'ireto Terms ireto amin'ny fahaizany manokana. Ireo fehezan-dalàna ireo dia hamatotra ary hitrandraka ny tombotsoan'ny antoko, ny mpandimby azy ary ireo nomena andraikitra nomena. Manaiky ianao fa tsy misy fiaraha-miasa, fiaraha-miasa, asa, na fifandraisana eo amin'ny maso ivoho misy eo aminao sy aminay vokatry ny Terms, na ny fampiasanao ny tranokala, vokatra ary / na serivisy.
Fanamarihana manokana momba ny ankizy
Ny tranokala dia tsy natao na natao hampiasain'ny ankizy latsaky ny 16 taona, ary ny vokatra sy serivisy azonay dia tsy vidian'ny zaza latsaky ny 16 taona. Tsy fanahy iniana angoninay ny mombamomba anay manokana amin'ireo mpitsidika izay latsaky ny 16 taona Raha ambany 16 taona ianao dia tsy mahazo mandefa fampahalalana manokana momba anay. Raha latsaky ny 16 taona ianao dia tokony hampiasa ny tranokala miaraka amin'ny faneken'ny ray aman-dreny na ny mpiambina anao fotsiny.